Ny macOS High Sierra 10.13.4 beta dia mametra ny fampiasana sary ivelan'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ny alatsinainy lasa teo dia namoaka beta vaovao an'ny macOS High Sierra i Apple. Ao anatin'izany, ankoatry ny zava-baovao hafa, hitantsika fa ny fampiasana karatra sary ivelany, endri-javatra nampanantenain'ny orinasa ho an'ny macOS High Sierra, dia voafetra amin'ny fitaovana miaraka amin'ny ThunderBold 3.
Ao amin'ny beta 5 isika, na izay mitovy, ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia tokony ho hitantsika ny kinova farany an'ny macOS High Sierra, miaraka amin'ny fahafaha mampifandray sary ivelany. Ho hitantsika eo raha toa ka refy tokana io sa maharitra ao amin'ireto kinova manaraka ireto. Na izany aza, ho an'ny Apple, ity fiasa ity dia amin'ny beta, ary noho izany dia tsy manome toky ny fiasan'ny marina izany.
Amin'ity kinova ity dia hitantsika fa nampidirina endri-javatra vaovao, izay tsy hita teo aloha. Anisan'ireny ny fahafaha mampifandray na manaisotra ny karatra sary fa tsy mila mivoaka isaky ny mandeha. Tena ilaina amin'ny solosaina finday io fiasa io, ny toerana itadiavana ny sary ivelany. Amin'izany fomba izany no ahazoanao mivezivezy amin'ny fotoana fohy, ary ny hery an-tsary rehefa tsy maintsy manao ny asa mafy amin'ny fanitsiana. Ankoatr'izay, ity dingana ity dia haingana sy matanjaka kokoa. Saingy ny lafy ratsy dia nijanona tsy niasa tamin'ny fifandraisana hafa ankoatran'ny Thunderbold 3.
Mandra-pahatongan'ny beta fahadimy, misy fenitra rehetra mifanaraka amin'ny fiasa macOS High Sierra. Mifanohitra amin'izany, ireo maodely farany indrindra ihany no manana fifandraisana Thunderbold 3. Miresaka momba ireo Mac navoaka tamin'ny 2016 sy 2017 izahay, namela ny ambiny ho sisiny.
Apple dia tsy mbola naneho hevitra momba izany, na amin'ny fomba mivantana na amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa. Noho izany, tsy fantatray raha toa ka mamaly fameperana vonjimaika, ny fahitana lesoka amin'ny fifandraisana taloha, na ny paikadim-barotra izay "mandrisika" anay amin'ny fanavaozana ny Mac.
Azo inoana fa fantatsika ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo mifototra amin'ny fenitry ny Apple amin'ny antonony na maharitra, ateraky ny orinasa sary izay tsy ao anatin'ny asan'i Apple. Tsarovy fa androany dia ny karatra Nvidia ihany no mifanaraka amin'ity asan'ny macOS High Sierra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny macOS High Sierra 10.13.4 beta dia mametra ny fampiasana sary ivelany amin'ireo Mac farany teo